मन्त्री छ्नोट गर्न नसकेपछी ओली दाहालले अपनाए यस्तो बाटो : यसरी लग्दैछ अन्तिम टुंगो ! – Setosurya
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्री छनोटमा निकै ठूलो दबाबमा परेका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी अत्यन्तै बढी देखिएपछि आफ्नो दलबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दबाबमा परेका हुन् ।
एमाले स्थायी कमिटीले भौगोलिकदेखि जातीय र लैंगिक सन्तुलनसँगै समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्ने क्षमतावान र दक्षलाई मन्त्री बनाउने मापदण्ड तय गर्दै मन्त्री छनोटको अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै अधिकार दिएको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष दाहालसहित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई अधिकार सुम्पिएको छ । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी निकै रहेकोले दुवै नेतालाई छनोटमा सहज नभएको सहयोगी टिमले बताएको छ । एमालेबाट मन्त्रीका लागि उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई मन्त्रीका सशक्त दाबेदार देखिएका छन् ।
पार्टी पदाधिकारीहरूले मन्त्री बन्ने चाहना राखे पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन छनोटको जिम्मा दिएपछि ओली झनै दबाबमा परेका हुन् । एमाले स्थायी समितिले मन्त्री छनोट गर्दा ‘भौगोलिक सन्तुलन, पार्टीभित्र नेताहरूको योगदान, योग्यता र क्षमता’ लाई ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ । स्थायी कमिटीको यो सुझावअनुसार सात वटै प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यता छ । तर, एउटै प्र्रदेश र पदाधिकारी आकांक्षी हुँदा कसलाई अवसर दिने भन्ने समस्या रहेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।
भौगोलिक सन्तुलन र योग्यलाई मात्रै स्थान दिँदा कतिपय आफ्ना भनिएका रिसाउने र घुक्र्याउने काम हुने विगतको अनुभवले पनि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेको ती नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बस्नसमेत चारैतिरबाट भनसुन गराउने आफ्नै सहयोगीदेखि निकटसम्मको दबाब झेलिरहेका ओलीले मन्त्रीका लागि आकांक्षी बढी हुँदा योग्य रोज्ने कि दबाबअनुसार छान्ने भन्ने निर्णय लिन नसकेका हुन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको रोजाइ योग्य र काम गर्न सक्ने नै हुनुपर्ने सुझाव निकट सबै नेताले दिएका छन् ।
पदाधिकारी बाहेकका स्थायी कमिटी सदस्यमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । पार्टीका हेबिवेट मानिएका नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्न नेतृत्वलाई समस्या भए पछि एक पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकालाइ पुनः अवसर नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ ।
उता माओवादीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी निकै बढेका छन् । अध्यक्ष दाहालबाहेकका सबै सांसद मन्त्रीका लागि दाबेदारी पेस गरिरहेका छन् । त्यसमाथि आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालयमा चार–पाँच नेता दाबेदार छन् । पार्टी एकतामा अध्यक्ष दाहाललाई सघाएको कारण पार्टीबाट वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्ने तय भए पनि सो मन्त्रालयमा अन्य नेताको दाबी रहेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीद्वय जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेतसँगै वर्षमान पुनले पनि गृह मन्त्रालय रोजेका छन् । थापा, बस्नेत र शर्मा एकता पक्षधर रहेकोले तीन मध्ये एकलाई दिने योजनामा दाहाल रहेका छन् । तर, पुनले आफूलाई नदिए देखाउने धम्की दिएपछि उनी दबाबमा परेका हुन् ।
संघीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित माओवादीका ५३ सांसदमध्ये ४६ जना मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि मन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट १७ सदस्य छन् ।
यद्यपी अध्यक्ष दाहालले रामबहादुर थापा, बर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरीराजमणि पोखरेल, बिना मगर र अमनलाल मोदीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएका छन । अन्य आकांक्षीलाई आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा मिलाउने भन्दै दाहालले शुक्रवार नै ६ जनाको नाममा टुंगो लगाएको माओवादी स्रोतको भनाई छ ।
भोलि बेलुकासम्म नाम फाइनल, पर्सी ३ बजे सपथग्रहण : प्रचण्ड
यस्तो छ, भरतपुर १९ मा दलहरुको तयारीः देबी ज्ञवाली भन्छन् जे परिस्थिती आउँछ फेस गर्न तयार छु
१०५ स्थानमा जित्दै एमाले अग्रस्थानमा, हेर्नुस यस्तो छ, अन्तिम नतिजा :
काँग्रेस-वामगठबन्धन बीच झपडः काँग्रेसको एजेन्ट बस्न गएका कार्यकर्तालाई रुखमा बाँधेर रातभरी कुटपिट
संसद २१ गतेसम्मका लागि स्थगित, उम्मेदवारी दर्ता अघि संविधान संशोधनको सम्भावना टर्‍यो
केपी ओली भन्छन्- ढुक्क हुनुहोस मंसिर पछि काठमाडौमा खाल्डाखुल्डी र देशमा कांग्रेस माओवादी देखिंदैन्, खोज्नुपर्छ !
जनगायक बद्रि पंगेनीले गाए प्रचण्डको चुनाबी गित- अघि बढ प्रचण्ड जनता साथमा छ ! हेर्नुहोस् भिडियो :